I-Huawei P10, ukuqala kokuvela kwi-MWC 2017 | I-Androidsis
Huawei kuye kwafuneka ukuba basebenzise ithuba lokungabikho kweGPS S8 kwi-MWC ukubonisa izihlunu nokubetha itafile. Kwaye inkwenkwe inayo. Besikwi ntetho ye-Huawei P10 kunye ne-P10 Plus kwaye iimvakalelo zazintle kakhulu.
Ngoku sele sisondele kwidokethi likaHuawei kwi-Mobile World Congress 2017 ukuvavanya Huawei P10 Kwaye sele ndikuxelele ukuba umsebenzi owenziwe ngumenzi waseAsia uyamangalisa, unikezela ngefowuni epheleleyo efikelela kwintengiso ukuze abe ngukumkani wesiphelo esiphakamileyo.
1 Uyilo olunomtsalane olugcina yonke iDNA yeHuawei
Uyilo olunomtsalane olugcina yonke iDNA yeHuawei
Uyilo lelinye lawona manqaku abalulekileyo kwisiphelo sendlela ephezulu kwaye iHuawei P10 ngumzekelo omtsha woku. Inqaku lokuqala elibalulekileyo liza ne imeko yokufunda iminwe, ogqithela ngaphambili. Isizathu? Ngale ndlela ifowuni ilunge ngakumbi.
Ngale ndlela, ngasemva siza kubona ilogo yeHuawei apho inzwa yebhayometri ibikade ikhona. Omnye umahluko omkhulu xa kuthelekiswa neHuawei P9 ubonakala kumacala omnxeba, ngoku ajikelezwe ngakumbi.
Iqela loyilo likaHuawei libandakanyile Ukugqitywa kokuqala ngokusikwa kweDayimani, Ukongeza ekuphuculeni ukugqitywa kwesanti. Ifowuni ihleli kakuhle kakhulu esandleni, ibonelela ngento emnandi kakhulu kunye nepremiyamu.
Kwaye kunjalo ngemilinganiselo ye I-145.3 x 69.3 x 7.1 mm kunye nobunzima beigram ezili-145 kuphela, ifowuni ilula kwaye iyasebenza. Ngokwemibala, inkampani izenzele umanyano neqela lePantone ukubonelela ngothotho lwee-shades ezinomdla kakhulu: 'Greenery', 'Dazzling Blue', 'Rose Gold', 'Mystic Silver', 'Graphite Black' kunye 'Prestige' Igolide ».
Ixabiso Ama-euro angama-649 afumaneka nge-Matshi 15
Bekulindelwe ukuba i-Huawei P10 ibinezixhobo ze-hardware ekuphakameni kwesiphelo sendlela kwaye amarhe ekugqibeleni azalisekisiwe. Ukubona izixhobo zekhompyutha ezinamandla ezixhonyiweyo kule terminal, zifana ncam naleyo yeHuawei Mate 9, bayenza le nto ibe sisilo sokwenene.
Inkqubo yakho I-Kirin 960 ene-4 GB ye-RAM kunye neAdreno G71 GPU enamandla iya kuvumela nawuphi na umdlalo okanye usetyenziso ukuba luhanjiswe ngaphandle kweengxaki ezinkulu, nokuba bafuna umthwalo ongakanani na. Ikhamera iya kuphinda ibe yenye yamandla e-Huawei entsha.
Ngale nto, umenzi womeleza ukuzibophelela kwakhe kuLeica ukwenza ikhamera yeHuawei P10 isimangaliso sokwenyani. Sele inekhamera ye-Mate 9 iimvakalelo zazilunge kakhulu, kungabikho vavanyo lwefowuni ngokucokisekileyo, kubonakala ngathi ikhamera yeHuawei P10 yenye yezona zinto zibalaseleyo kwintengiso.
Ifowuni epheleleyo ngokwenene kwaye uHuawei ushiya umyalezo ocacileyo: inokujamelana nazo ezinkulu kuba, ngokulula, umenzi sele eyile ye-olympus yeemveliso ezilukhetho lokuqala xa ufuna ukuthenga isiphelo esiphezulu ifowuni.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Huawei » IHuawei P10, ukubonakala kokuqala
UJhon F Palomino Ferro sitsho
Umnqweno owoyikeka ngokwenene ndinokuba nawo
Phendula Jhon F Palomino Ferro
URigoberto Gutierrez sitsho
Inomdla kangakanani, ndiyathanda ukuba siyilinde ukuba ikhutshwe
Phendula kuRigoberto Gutiérrez
Phantse zonke iinkcukacha zobuchwephesha ze-Samsung Galaxy S8 kunye ne-S8 Plus sele zaziwa
Ukunyuka kwee-smartphones ezinezikrini ze-AMOLED kuyaqhubeka nokwenzakala kwii-LCDs